Nidaamyada dhexe iyo dhexe - Cazoo
Bogga ugu weyn » Bogga ugu weyn » Nidaamyada dhexe iyo dhexe
Tag: nidaamyada dhexe, nidaamyada baahsan
Waqtiga akhriska: 1 daqiiqo
Fikradda ah dhexe waxaa loola jeedaa awood qaybinta iyo maamulka hay'ad ama shabakad. Markuu nidaamku udub dhexaad u yahay, taas macnaheedu waa hababka qorshaynta iyo go'aan qaadashadu waxay ku urursan yihiin hal dhibic faahfaahinta nidaamka.
Nidaam maamul, nidaamin, ayaa looga baahan yahay nidaam kasta. Taas la'aanteed, go'aanno lama sameyn karo oo jihada ku siinaya shabakadda inteeda kale. Heerka dowladnimo wuxuu u dhexeyn karaa qeexidda xeerarka aasaasiga ah iyo maareynta yar ee shaqo kasta oo nidaamka ah.
Nidaamka dhexe, barta dhexe ee awoodda wuxuu oggolaadaa oo uu fuliyaa go'aannada, kaas oo markaa u gudbay heerarka hoose ee awoodda.
Ka soo horjeedka nidaamka dhexe waa nidaam baahinta, halkaas oo go'aannada lagu gaarayo qaab loo qaybiyey iyada oo aan la isuduweyn maamul dhexe.
Su'aasha muhiimka ah ee dooda udhaxeysa maamulka dhexe iyo baahinta xukunka ayaa ah in waxyaabaha u gaarka ah go'aan qaadashada ay tahay inay ka dhacaan barta dhexe ee shabakada, ama loo igmado meel ka baxsan hey'ad dhexe.
Waxaa jiri kara dhowr Faa'iidooyinka u dhexeynta:
Istaraatiijiyadda muddada-dheer ayaa si adag loo xakameyn karaa
Mas'uuliyadaha si wanaagsan ayaa loogu qeexay nidaamka dhexdiisa
Go'aan sameynta waa mid deg deg ah oo cad
Awoodda dhexe waxay daneyneysaa barwaaqada shabakadda oo dhan
Qaar ka mid ah Faa’iido darrooyinka dhexe waxay noqon karaan:
Isgaarsiin la’aan iyo kala duwanaansho u dhexeeya xarunta iyo meelaha kale
Suurta galnimada musuqmaasuq
Waxaad ubaahantahay inaad kusii hayso awooda heerka sare
Ka saarida jilayaasha maxaliga ah ee leh aqoon ama xirfado gaar ah
Kahor dhalashadii Bitcoin waxay ahayd caqiido guud oo ahayd inaysan macquul aheyn in la sameeyo shabakad baahsan halkaas oo la isku afgartay lagu gaadhay iyada oo aan cillado la taaban karo jirin.
Si kastaba ha noqotee, markii la hirgaliyay Bitcoin, shabakad baahsan ayaa noqotay bedel lagu dhaqmi karo kuwa dhexe. Tani waxay kadhigtay doodii udhaxaysay xarunta dhexe iyo baahinta mid aad u faahfaahsan waxayna siisay bedel suuragal ah qaababka awooda jira.
Maqaalka horeWaa maxay shabakad aan aamin lahayn, iyada oo aan loo baahnayn kalsooni
Waa maxay Swan madow? Waxaan sharxeynaa dhacdadii Black Swan.